ကျူးပါး ခါးပတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကိုင်းပါး ခါးပတ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအလွန် ခိုက်ပါး ခါးပတ်ထဲမှ မိမိတို့သိထားသည့် အရာဝတ္ထုများ (အတိုင်းအတာအား AU ဖြင့်ဖော်ပြသည်)
ဂြိုဟ်ကြီးများ: ဂ ၊ စ ၊ ယ ၊ န
စင်တောရပ်ဂြိုဟ်ပု ကျူးပါး ခါးပတ်
ရင်းမြစ်: Minor Planet Center, cfeps.net and others
ခိုက်ပါး ခါးပတ် (အင်္ဂလိပ်: The Kuiper belt) (/ˈkaɪpər/ or /'køypǝr/)သည် နေစကြာဝဠာ၏ ဂြိုဟ်များအပြင်ဘက် နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ပတ်လမ်းမှ စတင်ကာ နေမှ ၅ဝ AU နီးပါးခန့်ထိ တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ ခါးပတ်နှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် အဆပေါင်း ၂ဝ မှ ၂ဝဝ ထိ ကြီးမားကာ အဆပေါင်း ၂ဝ အထိလည်း ဝေးကွာလှသည်။ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ ခါးပါတ်ကဲ့သို့ ခိုက်ပါခါးပတ်တွင် သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် နေစကြာဝဠာဖွဲ့တည်ချိန်က ကျန်ရှိသော အကြွင်းအကျန်များစွာ ပါဝင်သည်။ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများသည် အဓိကအားဖြင့် ကျောက်၊ သတ္တုများဖြင့် ဖွဲ့တည်ကြသော်လည်း ခိုက်ပါးခါးပတ်မှ အရာဝတ္ထုများသည် မီသိန်း၊ အမိုးနီးယား ရေကဲ့သို့သော အေးခဲနေသည့် အရာဝတ္ထုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြသည်။ မိမိတို့ တရားဝင်သိထားသည့် ခိုက်ပါးခါးပတ်၏ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားသုံးခုမှာ ပလူတို၊ ဟူမီယာနှင့် မိတ်မိတ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ထရိုင်တွန်၊ စနေဂြိုဟ်၏ ပရူဘီ အစရှိသော နေစကြာဝဠာ၏အချို့သော ဂြိုဟ်ရံလများသည် ယင်းနေရာမှ အခြေတည်လာကြသည်။
ခိုက်ပါးခါးပတ်သည် ဒတ်ချ်-အမေရိကန်လူမျိုး နက္ခတ္တပညာရှင် ဂရန်း ခိုက်ပါးအား အစွဲပြုကာ မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဂရန်း ခိုက်ပါးသည် ခိုက်ပါး ခါးပတ်တည်ရှိကြောင်း အမှန်တကယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ခိုက်ပါး ခါးပတ်အား Oort Cloud နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။ ယင်းသည် အဆပေါင်း ထောင်ချီကာ ပိုမိုဝေးကွာပြီး အချပ်ပြားပုံစံ မဟုတ်ပေ။ ပလူတိုသည် ခိုက်ပါးခါးပတ်၏ အကြီးမားဆုံးသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ပလူတိုအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ယင်းတစ်ခုတည်း မဖြစ်တန်ရာဟု ခန်းမှန်းခဲ့ကြသည်။ ယခုခေါ်ဆိုကြသည့် ခိုက်ပါးခါးပတ်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပုံစံများစွာဖြင့် အဆိုပြုခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတည်ရှိသည့် ပထမဆုံးသက်သေအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့သည်။
trans-Neptunian တည်ရှိကြောင်း ပထမဆုံး အကြံပေးသူမှာ ဖဒရစ် လီယိုနက် ဖြစ်သည်။ များမကြာခင် Clyde Tombaugh ဆိုသူမှ ပလူတိုအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် လီယိုနက်သည် ပလူတိုတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အခြားသော မလေ့လာရသေးသည့် အရာဝတ္ထုများသည် တည်ရှိအုံးမည်ဟု တွေးမိလေသည်။ ယင်းခုနှစ်မှာပင် နက္ခတ္တပညာရှင် Armin Otto Leuschner ဆိုသူမှ ပလူတိုသည် ပတ်လမ်းရှည် ဂြိုဟ်ဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုများထဲက တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပေးခဲ့သည်။"
↑ Kuiper belt - oxforddictionaries.com
↑ Alan Stern (1997). "Collisional Erosion in the Primordial Edgeworth-Kuiper Belt and the Generation of the 30–50 AU Kuiper Gap". The Astrophysical Journal 490 (2): 879–882. doi:10.1086/304912. Bibcode: 1997ApJ...490..879S.
↑ Audrey Delsanti။ The Solar System Beyond The Planets။ Institute for Astronomy, University of Hawaii။ 25 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 9, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Krasinsky, G. A. (July 2002). "Hidden Mass in the Asteroid Belt". Icarus 158 (1): 98–105. doi:10.1006/icar.2002.6837. Bibcode: 2002Icar..158...98K.
↑ Craig B. Agnor (2006)။ Neptune's capture of its moon Triton inabinary-planet gravitational encounter။ Nature။ 21 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 20, 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What is improper about the term "Kuiper belt"? (or, Why nameathing afteraman who didn't believe its existence?)။ International Comet Quarterly။ October 24, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Davies၊ John K.; McFarland၊ J.; Bailey၊ Mark E.; Marsden၊ Brian G.; Ip၊ W. I. (2008)။ "The Early Development of Ideas Concerning the Transneptunian Region"။ in M. Antonietta Baracci; Hermann Boenhardt; Dale Cruikchank; Alessandro Morbidelli (eds.)။ The Solar System Beyond Neptune (PDF)။ University of Arizona Press။ pp. 11–23။ 20 February 2015 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျူးပါး_ခါးပတ်&oldid=643662" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။